Ukuziphendulela - TheOneSpy Smartphone Monitoring Software
I-TheOneSpy ayinalo iwaranti noma ukumelelwa ukuthi le website izokuhlangabezana nezidingo zakho, ukuthi iyoba ngekhwalithi eyanelisayo, ukuthi iyofanelana nenjongo ethile, ukuthi ngeke iphule amalungelo wabantu abavela eceleni, ukuthi iyohambisana nayo yonke izinhlelo, ukuthi izobe zivikelekile nokuthi yonke imininingwane enikeziwe izoba nenembile. Asenza isiqinisekiso semiphumela ethile evela ekusebenziseni le webhusayithi.
Akukho nhlobo yale webhusayithi okuhloswe ukuba ibe iseluleko futhi okuqukethwe kwalolu website akufanele kuncike lapho wenza noma yiziphi izinqumo noma uthatha noma yikuphi ukuziphatha kwanoma yiluphi uhlobo.
Akukho nhlobo yale webhusayithi okuhloswe ukuba yenze isipho esivumelwaneni esamukelekayo. Azikho izimpahla kanye / noma amasevisi athengiswa ngale webhusayithi kanye nemikhiqizo kanye / noma imininingwane yesevisi inikezwa ngezinhloso zolwazi kuphela.
Yize yonke imizamo yenziwe ukuqinisekisa ukuthi zonke izethulo ezicacile zemikhiqizo kanye / noma izincazelo zamasevisi atholakalayo ku-TheOneSpy zihambisana nemikhiqizo yangempela kanye / noma amasevisi, i-TheOneSpy ayinabo obangela ukuhlukahluka okuvela kulezi zincazelo.
I-TheneneSpy ayifuni noma iqinisekisa ukuthi imikhiqizo kanye / noma amasevisi anjalo azotholakala kithi noma endaweni yethu. Ngenxa yalesi sizathu, sicela uxhumane nathi ngaphambi kokuvakashela uma ufisa ukubuza mayelana nokutholakala kwemikhiqizo kanye / noma amasevisi. Noma yimuphi uphenyo olunjalo aluvuli noma yiliphi iwaranti eveza noma echazwe ukuthi imikhiqizo kanye / noma izinsizakalo ezenza isihloko sophenyo lwakho zizotholakala lapho ufika endaweni yethu.
Yonke imininingwane yamanani kwiwebhusayithi ilungile ngesikhathi sokuya ku-intanethi. I-TheneneSpy inelungelo lokushintsha amanani nokushintsha noma ukususa noma yiziphi izinhlinzeko ezikhethekile ngezikhathi ezithile futhi ngokudingekile. Yonke imininingwane yamanani iyabuyekezwa futhi ibuyekezwe ngemuva kweminye iminyaka engu-2.
Umsebenzisi wokugcina we-TheOneSpy, ekudalweni kwe-akhawunti yakhe nokuthenga isofthiwe, kuzodinga lapha ukwamukela imigomo nemibandela elandelayo ngezansi nefomu lesivumelwano.
Ayikho iwaranti eyengeziwe LE SOFTHIWE TheOneSpy NENKONZO nokunye 3RD-WEQEMBU ISICELO, SERVICE FUTHI / NOMA SOFTWARE USED ngokuhlanganyela TheOneSpy SERVICE INIKEZELWA NGAPHANDLE UHLOBO IZIQINISEKISO LOKWENGEZA. BANINGABENZISWA KWEZINDABA ZAKHO, NGOKUPHILA KWENQUBO. UJehova wathi Nesitatimende ezihilela SERVICE, kanye nabalingani bayo, NOMA abaphakeli NOMA YILUPHI UHLOBO ezinje OF yabathintekayo GROUP, is ngaphakathi accordance nga KANYE Bizela, NGEZINGA APHELELE WE izidingo zomthetho applicable. THE TheOneSpy enkonzweni kuhlanganise Ntshangase yabathintekayo GROUPS, NGEKE qinisa ukuthi ukusebenza kwe-TheOneSpy SERVICE uyobe ukhululekile YILUPHI UHLOBO AMAPHUTHA nazo THE USER NOMA uyobe ukhululekile nanoma yikuphi ukuphazamiseka AMANDLA. Ngaphezu kwalokho, UKUTHI (TheOneSpy) SERVICE, uyofanelwa FIX LABO amaphutha, UKUTHI TheOneSpy INKONZO Iseva BAYO ESIFANELE ARE NGAPHANDLE izingxenye ezingaphephile kanye isibambiso NAKANJANI UKUTHI TheOneSpy_ SERVICE UNGATHANDA nemfuneko YAKHO subjective NOMA INHLOSO. ISIPHUMA SESIPHUMA SIKHUMELEKILE NGOKUBA SIKHUMELEKA NGOKUNYE NOKUPHUMA KWEZINDLELA ZOKUSEBENZISWA KWEZIMALI ZAKHO, NOMA YINI INDLELA YOKUPHILA NGOKUSEBENZISWA KANYE NEMINININGWANE.
Ukuqopha kocingo okusekelwe e-Android Isevisi ye-TheOneSpy okwamanje inikeza isici esiphathelene nokurekhoda kwekholi ku-yesikhulumi se-Android. Noma kunjalo, kuyilapho kunjalo, kukhona namanje abakhiqizi bamaseli okwamanje abesekeli isici esishiwo. Yeluleka ukuthi lokhu kungenxa yezimo ezithintekayo kulowo mkhiqizo. Ezimweni ezinjalo, isevisi ye-TheOneSpy ingasebenza kuphela kumsebenzisi wokuphela ngokunciphisa imali yokubhalisa ngomunye wesihlanu noma ngokuqhubeka nokwandisa ukubhalisa uma kwenzeka ikhasimende, elinomnikazi weselula elingavumelani nesici esishiwo, sesivele sesayinwe for service yokuqopha value-added service.
IZINTO EZOKUQONDISA: Isevisi ye-TheOneSpy ihloselwe ukuba yithuluzi elenza ukuqapha okuphumelelayo kwamagard akho nabasebenzi ngokuqondene ne-smartphone, okungabanikazi bomsebenzisi wokugcina noma imvume edingekayo kanye nemvume yokuqapha. Kungumsebenzi womsebenzisi wokugcina ukwazisa abasebenzisi be-smartphone abakhethiwe ukuthi imisebenzi yabo ibukwa. Uma kwenzeka ukuthi umsebenzisi we-TheOneSpy isebenzise i-party noma amaqembu abathintekayo yi-service, uzobe ephulwa ngokuqondile kwemithetho kahulumeni kanye nezwe. Ngaphezu kwalokho, esimweni esinjalo lapho umsebenzisi wokugcina efaka isofthiwe kwi-smartphone engeyona eyomnikazi weqembu, I-TheOneSpy izohlinzeka ngokubambisana ngokugcwele kumagunya kahulumeni nesifundazwe ngokuhambisana nemithetho. Nguwo kuphela umthwalo wemisebenzi yomsebenzi we-TheOneSpy ukuqeda ngokugcwele futhi ukulalela imithetho kahulumeni kanye neyomthetho esebenzayo ekusetshenzisweni kwesicelo ngokuqondene nesevisi yakhe ethile. Uma kwenzeka kukhona ukungabaza ngokuphathelene nemithetho esebenzayo, umsebenzisi we-TheOneSpy kufanele athole ngokushesha uthintana nommeli wakhe wendawo ngaphambi kokubeka isevisi ye-TheOneSpy. Lapho ukuphela komsebenzisi ukulayisha isofthiwe ye-TheOneSpy, uqinisekisa ngokuzenzakalelayo ukuthi uhlelo lokusebenza luzosetshenziswa ngendlela ehambisana nemithetho kahulumeni nesifundazwe. Ukuqapha imisebenzi yomakhalekhukhwini yabanye abantu noma ngisho nokufaka isicelo kudivayisi yabo ngaphandle kokwazi kwabo kungabhekwa njengesenzo esivumelana nohlaka lomthetho wezwe lomsebenzisi wokugcina. I-TheneneSpy ngeke ithathe umthwalo wemfanelo ngokuphathelene nokuxhashazwa okulandelayo noma ukulimala okubangelwa isicelo. Kungumthwalo womsebenzisi wokugcina ukwenza ngendlela enesibopho ehambelana nohlaka lomthetho esifundeni sabo. Umsebenzisi wokuphela, ekuthengeni kanye / noma ekulayisheni isicelo, uzozinikela ekuvumelaneni nayo yonke imininingwane ebhaliwe ngenhla.
Disclaimer Isofthiwe yesicelo se-TheOneSpy ithuthukiswe ukuze isebenze ngenhloso yokuqondiswa kokuziphatha kwabazali abafisa ukuqondisa imisebenzi yamagceke abo angaphansi noma abaqashi abafisa ukuqondisa umsebenzi wabo-base, kodwa babe nokuvota, kwemvume ephepheni. Umthengi we-TheOneSpy software kumele abe ngumnikazi weselula noma abe nemvume ephepheni evela kumawadi noma abasebenzi abanikeza igunya lokuphatha imisebenzi yabo ngaphambi kokuba bakwazi ukufaka, ukulanda noma ukunika amandla isofthiwe yeTheOneSpy kwi-particular umakhalekhukhwini, ukuqinisekiswa okudingekayo uma efuna ukuqapha ngendlela ehlakaniphile. Isevisi ye-TheOneSpy akufanele isetshenziswe njengendlela yokuhlola noma yokugxuma noma ubani. Isofthiwe yesicelo se-TheOneSpy akufanele ilandelwe ukuqapha umakhalekhukhwini nganoma yimuphi omunye umuntu kumbuthano womphakathi wokugcina, kuhlanganise nezingane zabo eminyakeni engaphezu kwe-18 ngaphandle kwemvume yabo evulekile, ephepheni. Uma kwenzeka umsebenzisi wokuphela ezama ukusebenzisa uhlelo lweTheOneSpy ekuqapha umakhalekhukhwini ongenawo, noma angenayo imvume ecacile yabathintekayo, lesi senzo singabonakala njengokuphulwa ngokuqondile kwesifundazwe nesifundazwe imithetho. I-TheneneSpy izobophezela ukunikeza ukubambisana okugcwele kumagunya kahulumeni kanye nesifundazwe. Njengendlela yokwenza ngcono ukuqonda lokho okuvunyelwe kwi-papier, umuntu oqashweyo noma umuntu onomakhalekhukhwini kufanele anikeze imvume ecacile kumsebenzisi wokugcina we-TheOneSpy_ isicelo sokuqapha imibhalo yabo, umlando wocingo , I-imeyile, indawo, indawo ye-multimedia, uhlu loxhumana nabo, umlando wokungena kanye nezinye izintandokazi zesiphequluli se-intanethi, i-BBM namakholi wefoni okuqoshiwe nganoma yisiphi isikhathi esithile. Nguwo kuphela umthwalo wemisebenzi yomsebenzi we-TheOneSpy ukuqeda ngokugcwele futhi ukulalela imithetho kahulumeni kanye neyomthetho esebenzayo ekusetshenzisweni kwesicelo ngokuqondene nesevisi yakhe ethile. Isofthiwe yesicelo se-TheOneSpy ayinaso umthwalo wemfanelo kunoma yimuphi umonakalo olandelayo noma ukusetshenziswa kabi kwesicelo. Kuphezu komsebenzisi wokuphela ukucwaninga imithetho yesifunda sakhe ukuqonda ukufaneleka kwezenzo zabo.Umsebenzisi wokuphela, ekuthengeni kanye / noma ukulanda isicelo, uzozinikela ekuvumelaneni nayo yonke imininingwane ebhaliwe ngenhla.